Iyi Yakavanzika Dzinotonga nzira iyo Fyrebox Quizzes inounganidza, inoshandisa, inochengetedza uye kuburitsa ruzivo rwunounganidzwa kubva kune vashandisi (yega yega, "Mushandisi") yeiyo https://www.fyrebox.com webhusaiti ("Saiti"). Iyi yekuvanzika mutemo inoshanda kune iyo Siti uye zvese zvigadzirwa uye masevhisi anopihwa neFyrebox Quizzes
Ruzivo rwekuziva munhu
Tinogona kuunganidza ruzivo rwekuzvizivisa rwega kubva kuneVashandisi munzira dzakasiyana siyana, kusanganisira, asi zvisingagumiri ipapo, kana Vashandisi vashanyira saiti yedu, vanyoresa pane saiti, isa nzvimbo, uye zvine chekuita nezvimwe zviitiko, masevhisi, maitiro kana zviwanikwa zvatinoita. inowanikwa pane yedu saiti. Vashandisi vanogona kubvunzwa, sezvakakodzera, zita, email kero, kadhi rechikwereti ruzivo. Vashandisi vanogona, zvakadaro, kushanyira yedu saiti vasingazivikanwe. Isu tichaunganidza ruzivo rwekuzvizivisa kubva kuneVashandisi chete kana vangoerekana vaendesa ruzivo rwakadai kwatiri. Vashandisi vanogona kugara vakaramba kupa ivo pachavo ruzivo ruzivo, kunze kwekuti zvinogona kuvadzivirira kubva mukuita mune zvimwe zviitiko zvinoenderana neSaiti.
Asiri-munhu ruzivo rwekuzivikanwa
Tinogona kuunganidza isiri-yega ziviso yeruzivo nezveVashandisi pese pavanenge vachifambidzana neIsaiti yedu. Ruzivo rusiri rwemunhu rwekuziva runogona kusanganisira zita rebrawuza, mhando yekombiyuta uye neruzivo rwehunyanzvi nezveVashandisi nzira dzehukama kune yedu saiti, senge hurongwa hwekushandisa uye yevashandi vepaInternet vanoshandiswa uye nerumwe ruzivo rwakafanana.
Web browser makuki
Yedu Saiti inogona kushandisa "kuki" kusimudzira Mushandisi ruzivo. Webhusaiti yewebhu yevashandisi vanoisa makuki pane yavo hard drive yezvinorekodwa-zvekuchengeta uye dzimwe nguva kutevedzera ruzivo nezvavo. Mushandisi anogona kusarudza kuseta yavo yewebhu browser kuti arambe makuki, kana kukuzivisa iwe kana makuki ari kutumirwa. Kana vakaita saizvozvo, cherekedza kuti zvimwe zvikamu zveSayiti zvinogona kusashanda nemazvo.
Mashandisiro atinoita ruzivo
Fyrebox Quizzes anogona kuunganidza uye kushandisa Users ruzivo pachako kune zvinotevera zvinangwa:
Kuvandudza basa revatengi
Ruzivo rwaunopa runotibatsira kupindura kune ako mutengi webasa zvikumbiro uye rutsigiro runoda zvakanyanya
Kuita iwe pachako mushandisi ruzivo
Tinogona kushandisa ruzivo muunganidzwa kuti tinzwisise kuti Vashandisi vedu seboka vanoshandisa sei masevhisi uye zviwanikwa zvinopihwa pane yedu saiti
Kuti tivandudze yedu saiti
Tinogona kushandisa mhinduro yamunopa kuvandudza zvigadzirwa nemasevhisi edu.
Isu tinogona kushandisa iyo ruzivo Vashandisi vanopa nezve ivo pachavo pakuisa kodha chete yekupa sevhisi kune iyo kodhi. Isu hatigovani ruzivo urwu nemapato ekunze kunze kwekuda kwakaringana kupa basa racho.
Kuti utumire maemail nguva nenguva
Isu tinogona kushandisa email kero kutumira ruzivo rweMushandisi uye zvinyorwa zvine chekuita nechero ravo. Iyo inogona zvakare kushandiswa kupindura kubvunza kwavo, mibvunzo, uye / kana zvimwe zvikumbiro. Kana Mushandisi akasarudza kusarudza-kupinda mune yedu tsamba yekutumira, ivo vanogamuchira maemail ayo anogona kusanganisira kambani nhau, zvinyorwa, zvine chekuita nechigadzirwa kana ruzivo rwebasa, nezvimwewo Kana paine chero nguva Mushandisi angada kunyora kubva pakutambira maemail emangwana, isu tinosanganisira yakazara kunyora zvirairo pazasi peemail imwe neimwe kana kuti Mushandisi anogona kutibata padhuze neSaiti yedu.
Tinochengetedza sei ruzivo rwako
Isu tinogamuchira yakakodzera data kuunganidza, kuchengetedza uye kugadzirisa maitiro uye maitiro ekudzivirira kuchengetedza kubva kusingatenderwe kuwana, kushandurwa, kuburitswa kana kuparadzwa kweruzivo rwako pachako, zita remuchinda, password, ruzivo rwekutengesa uye data rakachengetwa pane yedu saiti.
Kugovera ruzivo rwako pachako
Hatitengese, tengesa, kana kubvarura Vashandisi ruzivo rwekuzivikanwa kune vamwe. Tinogona kugovera generic yakavhenganiswa yenzvimbo yeruzivo isina kubatana nechero ruzivo rwekuziva nezvevashanyi uye vashandisi nevatinoshanda navo bhizinesi, vatinonamata navo vanovimbika uye vashambadziri nekuda kwezvinangwa zvataurwa pamusoro apa. Tinogona kushandisa vechitatu vanopa vanhu rubatsiro kuti vatibatsire kuita bhizinesi redu neIsaiti kana kutonga zviitiko patiri, sekutumira matsamba kana kuongororwa. Tinogona kugovera ruzivo rwako nevatatu mapato nekuda kwezvikonzero zvishoma kana uchinge watipa mvumo yako.
Wechitatu bato webhusaiti
Vashandisi vanogona kuwana kushambadzira kana zvimwe zvirimo paSiti yedu zvinobatana nesayiti uye masevhisi evatikabatana navo, vatengesi, vashambadziri, vanopa marezinesi uye vamwe vanhu vechitatu. Isu hatidzore zviri mukati kana zvinongedzo zvinoratidzika pane aya masayiti uye hazvisi mhaka yeaitiro anoshandiswa nemawebhusaiti akabatana kana kubva kune yedu saiti. Uye zvakare, aya mawebhusaiti kana masevhisi, kusanganisira zvirimo nezvinyorwa, zvinogona kunge zvichichinja. Aya mawosi uye masevhisi anogona kunge ane yavo yekuvanzika mitemo uye yevatengi mashandiro emisangano Kutsvaga nekudyidzana pane chero imwe webhusaiti, kusanganisira mawebhusaiti ayo ane chinongedzo kune yedu saiti, inoenderana neya wega webhusaiti nemitemo.
Shanduko kune iyi mutemo yekuchengetedza
Fyrebox Quizzes Ltd ine pfungwa yekugadzirisa iyi yekuchengetedza nguva chero nguva. Kana tadaro, isu tichadzokorora iyo yakagadziriswa zuva pazasi peji ino uye kukutumira email. Isu tinokurudzira Vanoshandisa kazhinji kuti vatarise peji ino kana paine shanduko kuti vagare vaine ruzivo nezvekuti isu tiri kubatsira sei kuchengetedza ruzivo rwedu rwatinounganidza. Unobvuma uye unobvuma kuti ibasa rako kuongorora iyi yekuchengetedza nguva nenguva uye uzive nezvekugadziridzwa.
Kugamuchira kwako aya mazwi
Nekushandisa ino saiti, iwe unoratidza kugamuchira kwako iyi mutemo nemabatiro ebasa. Kana iwe usiri kubvumirana neiri mutemo, ndapota usashandise yedu saiti. Kuenderera mberi kwako kushandisa Saiti inotevera kutumira shanduko kune iyi mutemo kuchanzi kubvuma kwako shanduko idzodzo.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve ino Vanzika Policy, maitiro eiyi saiti, kana kubata kwako neiyi saiti, ndapota taura nesu ku:
Gwaro iri rakapedziswa kugadziriswa musi waKurume 9, 2020
Mutauro EnglishFrançaisEspañolDeutschРусскийالعربيةעבריתελληνικάPortuguês中国ItalianoNederlandsTiếng ViệtDansk한국어Melayuไทย日本語TürkçePolskieMagyarČeskýNorskBahasa Indonesiaខ្មែរУкраїнськийSvenskaбългарскиEestiHrvatskiLietuviųFilipinoSlovakRumunskiSuomiÍslenskuहिंदीLatviešuCatalàEuskalSrpskiBosanskiNorsk (Bokmål)հայերենລາວSlovenščinaAfrikaans普通話LatineБеларусCebuanoCorsuCymraegEsperantoفارسیGaeilgeGàidhlig na h-AlbaGalegoŌlelo HawaiʻiKreyòl AyisyenBasa JawaქართულიҚазақKurdîLëtzebuergeschMaoriМакедонскиМонголMaltiဗမာनेपालीਪੰਜਾਬੀپښتوSamoaSoomaaliUrang SundaKiswahiliதமிழ்اردوO'zbekייִדישzuluአማርኛAzərbaycanবাঙালিFryskગુજરાતીHausaHmongNdi Igboಕನ್ನಡКыргызчаMalagasyമലയാളംमराठीChichewaSesothoShonaسنڌيසිංහලТочикతెలుగుisiXhosaYoruba